Play FLV on Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah la Xoog Video Converter
FLV waa qaab video qeexay Adobe Systems ah. Goobaha online badan ayaa, sida YouTube, Hulu, FLV qaado sida default qaabab video ay. Waa qaabab video caan ah in laga daawan karaa nidaamyada hawlgalka ugu. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad qaadato FLV video in ay Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid cusub, waa in aan la akhriyi karin waxaa by. Halkan su'aashu waxay tahay sida loo ciyaaro FLV on Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah. Nasiib wanaag, aannu xal u heli. Waxaad ka ciyaari kara FLV on Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah iyadoo la isticmaalayo Wondershare Video Converter . Waxyaabaha uu noqon doono inta badan ka sahlan oo fudud.
Taageerada ilaa 150 qaabab file kala duwan, FLV ka mid ahaa.
Function Media gooya kaa caawinaysaa in aad si toos ah u sii qulquli FLV videos in Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah.
Hawlaha boosaska badan sida edit, download, qoraaga iyo gubi DVD.
Streaming ee 30X dhakhso xawaare aan khasaaro tayo leh.
Talaabada 1: Import video to this Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah video Converter
Waxaa jira 2 siyaabaha aad u dajiyaan video ah in this Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah video Converter. Waxaad si fudud u soo jiidi kartaa jeedi videos waa inay, ama waxaad riixi kartaa dar Faylal ay ku interface software si keeno. Codsigan taageertaa diinta Dufcaddii, si aad u dajiyaan karaa sida badan videos sida aad rabto. Waxay leedahay lahayn xaddidaadda size file max.
Talaabada 2: Calan qalab hoorto sida Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah
Converter video Tani waxay si deg deg ah lagu ogaan karaa in aad Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah ilaa iyo inta uu ku yaal shabakad isku aad PC. Si aad u dooratid qalabka geeyo aad, u tag "Stream" Murayaad ku taal dhinaca midig ee ugu sareeya barnaamijka iyo Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah ay doortaan sida qalab geeyo ah. Ka dib markii in, ku dhufatey "Stream" button on interface software ah.
Tallaabo 3: Ka bilow habka geeyo ee
Markaas daaqad arbushin doonaa. Halkan guji "Play To TV" oo aad isla raaxaysan kartaa FLV video shaashadda weyn. Waxa kale oo aad xakamayn kartid loo maqli karo ee la beddelo mugga ama doorashada dhacdo sida aad jeceshahay.
> Resource > Video > Sida loo Play FLV on Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah